Maxaad Ka Taqaan Naqshadaha Kala Duwan Ee Xinnaha Iyo Midka Ugu Fiican - Daryeel Magazine
Maxaad Ka Taqaan Naqshadaha Kala Duwan Ee Xinnaha Iyo Midka Ugu Fiican
Xine la’aani waa qurux la’aan, hadaad tahay gabadh Soomaliyeed! marsashada xinahu waa caado soo jireen ah oo aynu ka dhaxalnay hooyooyinkeen, oo inagu ababiyey marsashadiisa.
Xusuustaydii ciyaalnimo waxaan ku gadraadsaday anoo ciida madaxa laygu dhoobo, waxaanan la xidhiidhinaa xinnaha wakhtiyada farxada iyo damaashaadka marsashadiisa sid aarooska iwm.
Hadaba marsaneye muxuu yahay Xinahu? sidayse caleentiisa qoyani midab u sameysaa una qabtaa maqaarka?. Geedka Xinnaha oo ingiriisiga lagu magacaabo (Lawsonia inermis ama mignonette tree). Waa mid hido ahaan si weyn uga baxa dalkeena, ahna dhirta deegaan ahaan u dhalatay ciideena.
Waxaana laga helaa oo uu ka baxaa Somalia, Morocco,Algeria, Yemen, Tunisia, Libya, Saudi Arabia, Egypt, India, Iraq, Iran, iyo Pakistan.
Wadamadaas aan ka midka nahay ayaa dhamaan ayaa uu yahay xinnuhu kan koowaad ee dumarku isku qurxiyaan, ayna mariyaan xubnaha jidhkooda. Hadaba noocyada farshaxanka xinnaha oo lagu kala duwan yahay ahaa leh heerar iyo qurux kala cayiman oo lagu garto dumarka marsada, ee tijaabi aqoontaada oo sheeg intay u kala baxaan.
Intaynaan ka jawaabin su’aahlahaa, waxa is xusuusin mudan in xinahu aanu ahayn ka kaliya ee dumarka soomaliyeed ku qurxiyaan xubnaha jidhkooda! isaga oo ka xiiso batay qadaraxinihii laga samay niray sonkorta iyo khadaabkii laga soo waaridi jiray dalalka carabta, balse uu noqday wakhtigan aynu joogno ka kaliya aadka loo isticmaalo.
Naqshadaha xinaha oo aad u kala duwan aadna u tiro badan, waxa ugu caansan caalamka afar naqshadood oo aad u kala duwan: kuwaasoo kala ah :
4) naqshadhaynta Marookaanka.
Wuxuu u badanyahay ubaxyo waa mid fudud aad loo xardhay iyada oo, qofka marinayaa aad u dhuudhuubo taas oo aanu ka wada buuxinin xinaha xubinta uu marinayo oo uu isku dheeli tiro qiyaasta meeshuu marinayo iyo halka uu ka dhowrayo si ay isku leekaadan. Halkaana naqshadu u noqoto mid aad u muuqata.
Naqshada carabigu iyo dhamaan naqshadaha xinnaha oo dhami waxay mareen xadaarad ama horumaro kala duwan, iyaga oo dadkii hore badankoodu waxba qori jirin. Waxa imika jira, buugaag iyo diiwaan galino kala duwan oo u suurto galinaya dadka xiiseeya marinta xinnaha inay si fududu u helaan diiwaano ay ka xigtaan xirfadooda.
waa mid aad loo buurbuuray, iyaga oo aan ahamiyad badan siinin yaryareynta naqshada oo u badheedha muujintiisa, waxa kaloo uu ku caan yahay xinahoodu iyaga oo muddo badan ku daaya xubinta isaga oo ay doorbidaan inuu midabka xinahu aad u madoobaado
Nasiib xumose waxay imika aad u isticmaalaan dawada madoobaysada, iyaga oo ku badalay halkii xinnaha dabiiciga ahaa. Taasina ay sababto in dumar badani xasaasiyad ka qaadaan marsashada suntaa madow een loogu talo galin jidhka.
waa mid ku salaysan joomatari iyo layman laysku toosiyey, taasi oo ay ku yar yihiin ubaxyada iyo caleemuhu.
Iyaga oo ku marsada qori ama siriijka irbada oo u fududeeya, xardhida laymankaa ay ku saleeyaan naqshadahooda.
Oo aad caan u ah waa mid laga buuxiyo iyada oo lagu xardhayo dhamaan xubinta lagu naqshadaynayo, iyaga oo aad looga isticmaalo dalal kala duwan sida, pakistan, india, bangaladesh iyo qaar kaloo badan. Waxa ay haweenku marsadaan kaliya xilayada farxadaha sida ciidaha iyo arooska iyagoo ku qariya fariimo iyo sawiro kala duwan oo munaasabadaa ka turjumaaya.
Waxa la odhano karaa waa mid isku jirta oo u dhaxaysa saddexdaa nooc ee aan hore u soo sheegnay, waxase imika socota in Soomalida yurub iyo Somaliland aad u xiiseeyaan naqshadaha Sudan, inkastoo dumarka Soomaalida ah ee ku nool wadamada carabtu doorbidaan naqshad carabiga, ayaa reer noth ameerikana ku kala qaybsan yihiin dookhooda.
Xinnahii Soomalida oo aad moodo inuu isku badalayo madoobaysada timaha la marsaado sanadahii aynu soo dhaafnay, kaasi oo dumar badani ka wahsadaan qasida, diyaarinta iyo waliba sugida wakhtiga qaadanaysa Ayaad moodaa hadana inaanay kuba qanacsaneyn midabka dhiinka casaanka ah ee caadada u ahaa xinaha dabiiciga ah. Iyagoo badanka da’yartu doorbidaan madoobaysada ama labadaba oo la isku daro! Arrintaas oo aad murugo iyo khatar weyn ugu haysa caafimaadka dumarka soomaliyeed, waxay u baahan tahay wacyi galin weyn oo habeysan.
Waxaase hubaal ah in naqshadaha xinne Soomaligu yahay mid si qurxoon loo xardhay oo iskugu jira, caleemo iyo ubaxyo qurux badan. Sidaa daraadeedna aad u soo saara dumarnimada iyo bilicda quruxda haweenka soomaliyeed. Arrintaa awgeedna aniga laftaydu aan aad u xiiseeyo inaan faraha la galo mar kaasta oo aan haleelo.
7 Qodob Oo Ay Ku kala Duwan Yihiin Dadka Nolosha Guul Ka Gaara Iyo Kuwa Guuldareysta Maxaad Ka Taqaan Lawska Walnut Iyo Caafimaadka Ku Jira